SARCOIDOSIS कंसल्टेंट डिरेक्टरी
SarcoidosisUK सजग हुनुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ बिरामीहरूलाई थाहा छ कि कहिलेकाहीं सल्लाहकारहरूले आफ्नो sarcoidosis को लागि विशेषज्ञ हेरविचार गर्ने सन्दर्भमा रेफरलको लागि सोध्न को लागि कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुन्छ। नीचे सरकोडोसिस सल्लाहकार निर्देशिका यूके भर मा ज्ञात विशेषज्ञहरु को बढती डाटाबेस हो। यो रोगी र स्वास्थ्य सेवाका प्रविधिको लागि एक उपकरणको रूपमा डिजाइन गरिएको छ जसले प्रभावकारी हेरविचार गर्न यो बाधा हटाउन मद्दत गर्दछ।
Sarcoidosis परामर्शदाता निर्देशिका को उपयोग कसरि गर्नुहोस:
तपाईंको क्षेत्रमा क्षेत्रमा सरकोडोसिस सल्लाहकारहरूको विवरण खोज्न नक्सामा नीलो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। पपअप बाकसहरूमा बाह्य लिङ्कहरू प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क सल्लाह विवरणहरू र सन्दर्भहरूको बारेमा थप जानकारी। तपाईले खोजी खोजीलाई सान्दर्भिक बनाउन नक्शा माथिको खोजी प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
'ठेगाना' द्वारा खोज्नुहोस्: यूके पोष्टकोड, शहर वा शहर प्रयोग गर्नुहोस्।
'सलाहकार नाम / अंग आदि' द्वारा खोज्नुहोस्: एक विशेष खोजशब्द खोज्नुहोस्। सुझाव: उदाहरणका लागि खोजी 'पुरूष' र 'श्वसन' र 'फेफड़ों' को लागि वैकल्पिक शब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
त्रिज्या: तपाईंको नजिकका सल्लाहकारहरू फेला पार्न खोज रेडियस (माइल) समायोजन गर्नुहोस्। यदि तपाईले ठेगाना प्रविष्ट गर्नुभयो भने त्रिज्या प्रकार्यले मात्र काम गर्दछ। सुझाव: सम्पूर्ण ब्रिटेन खोज्नका लागि, 500 माइल चयन गर्नुहोस्।
रिसेट गर्नुहोस्: यसले सबै खोज विकल्प रिसेट गर्छ।
जूम: नक्साको छेउमा र बाहिर बाहिर नक्शाको दाँयामा प्लस र माइनस बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण स्क्रिन: नक्सा पूर्ण स्क्रिन बनाउनको लागि नक्साको शीर्षमा स्क्वायर बटन प्रयोग गर्नुहोस्। एउटै बटन त्यसपछि नक्सा सामान्य आकारमा फिर्ता घटाउँछ।
Sarcoidosis या श्वसन विशेषज्ञहरु?
यस निर्देशिका मा शामिल अधिकांश सल्लाहकार श्वसन चिकित्सा मा विशेषज्ञता हुन्छन् किनकी sarcoidosis को मामलाहरु को लगभग90% फेफड़ों मा शामिल छ। Sarcoidosis को दुर्लभता र बहु-प्रणाली स्वभाव (र यूके स्वास्थ्य सेवा प्रणाली व्यवस्थित तरिका), सल्लाहकार जो केवल sarcoidosis मा विशेषज्ञ र धेरै प्रकार को sarcoidosis को उपचार वास्तव मा अवस्थित छैन। यदि सरकोडोसिसले तपाईंको शरीरको एक भन्दा बढी भागलाई गम्भीर असर गर्छ भने तपाइँले धेरै विशेषज्ञहरूलाई रेफरलहरू आवश्यक पर्न सक्छ।
डाइरेक्टरीमा को समावेश छ?
हामीले सल्लाहकारहरू समावेश गरेका छौं जसले अत्यधिक सरसोडोसिस रोगीहरू र हामीसँग जाँच गरेको छ र प्रमाणित गर्दछौं। यदि तपाईंको परामर्श सूचीमा छैन र तपाईं तिनीहरूलाई थपिनु पर्छ, हामी तपाईंलाई सुन्न चाहानुहुन्छ। कृपया उनीहरूको नाम र अस्पताल पठाउनुहोस् हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। यदि तपाइँ एक सल्लाहकार हुनुहुन्छ र सूचीबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया सम्पर्कमा जानुहोस्.
कृपया ध्यान दिनुहोस्: यो जानकारी हाल हाल सरकोडोसिसका द्वारा प्रमाणित भएको थियो। यद्यपि हामी कुनै पनि विवरण परिवर्तन, कुनै गलत जानकारी वा परिणामको कुनै पनि असुविधा परिणामको लागि उत्तरदायी हुन सक्दैन। कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाई त्रुटि देख्नुहुन्छ र हामीलाई अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ।
वा डा नाम / अंग
कोटि: सबैकार्डियोलजी त्वचा विज्ञान बौद्धिक फेफड़ों रोग (आईएलडी) न्यूरोलोजी नेत्र विज्ञान श्वसन रोग विज्ञान
यस स्थानमा कुनै नतिजा फेला परेन। फेरि प्रयास गर्नुहोस।
हेरचाहको लागि विशेषज्ञ केन्द्र
सरकोडोसिस सबैभन्दा सामान्य अन्तर्वार्तात्मक फेब्रुअरी रोगहरू (आईएलडी) मध्ये एक हो। उपरोक्त डाइरेक्टरीमा थुप्रै सरकोडोसिस विशेषज्ञहरूले एन एच एस ट्रस्टमा आईएलडी सेवाहरू भित्र, वा नजिकको काम गर्नेछन्। तल ब्रिटेनमा मुख्य ILD केन्द्रहरूको सूची हो।
सूची 1 मा आधारित छ) BLF डेटा, 2) एनएचएस इङ्गल्याण्ड आईएलडी विशेषज्ञ सेवा नीति र 3) SarcoidosisUK ज्ञान र सम्पर्क।
यस जानकारीलाई समावेश गरिएको छ कि हालको वर्तमान जानकारी जहाँ ब्रिटेनमा सरकोडोसिस हेरविचारको लागि शीर्ष विशेषज्ञ केन्द्रहरू छन्। यो हो होइन एक आधिकारिक वा व्यापक सूची र केवल मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
इङ्गल्याण्ड चिसिरी र Merseyside Aintree विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड पूर्वी मिडलैंड्स विश्वविद्यालय अस्पताल लेसेस्टर एन एच एस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड पूर्वी मिडलैंड्स नटिंगम विश्वविद्यालय अस्पतालहरु एन एन एस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड इङ्गल्याण्डको पूर्व Papworth अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड दक्षिण पश्चिम रयल डेभन र एक्सेटर फाउण्डेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड दक्षिण पश्चिम उत्तर ब्रिस्टल एन एच एस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड लन्डन विश्वविद्यालय कलेज लन्डन अस्पतालहरु एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड लन्डन रयल ब्रोमप्टन र हैयरफील्ड एन एन एस फाउण्डेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड लन्डन केटा र एस थमस 'एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड लन्डन इम्पीरियल कलेज हेल्थकेयर एन एन एस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड Greater Manchester, Lancashire
र दक्षिण कम्ब्रिया दक्षिण मैनचेस्टर एन एच एस फाउंडेशन ट्रस्ट विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय
इङ्गल्याण्ड थम्स घाटी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पतालहरु एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड Wessex विश्वविद्यालय अस्पताल साउथमप्टन एन एच एस फाउण्डेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड Wessex पोर्टोमोथ अस्पतालहरु एनएचएस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड यॉर्कशायर र हम्बर लीड्स शिक्षण अस्पतालहरु एन एन एस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड यॉर्कशायर र हम्बर शेफिल्ड शिक्षण अस्पतालहरू एन एन एस फाउण्डेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड यॉर्कशायर र हम्बर हिल र पूर्वी यॉर्कशायर अस्पतालहरु एनएचएस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड उत्तरी इङ्गल्याण्ड न्यूकैसलमा टिइन अस्पतालहरू एनएचएस फाउण्डेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड पश्चिम मिडलैंड्स विश्वविद्यालय अस्पतालहरु बर्मिंघम एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड उत्तरी मिडल्याण्ड्स विश्वविद्यालय नर्थ मिडलैंड्स एन एच एस ट्रस्ट
स्कटल्याण्ड स्कटल्याण्ड ग्रेटर ग्लासगो र क्लाइड
स्कटल्याण्ड स्कटल्याण्ड ग्र्याम्पियन
स्कटल्याण्ड स्कटल्याण्ड लुथियन
वेल्स वेल्स कार्डिफ र वेले विश्वविद्यालय हेल्थ बोर्ड
वेल्स वेल्स एबरटा ब्रु मोर्जान्न्ग विश्वविद्यालय स्वास्थ्य बोर्ड
वेल्स वेल्स Betsi Cadwaladr University Health Board
उत्तरी आयरल्याण्ड उत्तरी आयरल्याण्ड पश्चिमी ट्रस्ट
उत्तरी आयरल्याण्ड उत्तरी आयरल्याण्ड उत्तरी ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड दक्षिण पूर्व ब्राइटन र ससेक्स विश्वविद्यालय अस्पतालहरू एन एन एस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड यॉर्कशायर र हम्बर मिड यार्कशायर अस्पतालहरु एनएचएस ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड पूर्वी मिडलैंड्स न Norfolk र नर्वेच विश्वविद्यालय अस्पतालहरु एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट
इङ्गल्याण्ड लन्डन राजाको कलेज अस्पताल NHS फाउण्डेशन ट्रस्ट
कृपया ध्यान दिनुहोस्: क्षेत्रहरू केवल सूचक हुन्। धेरै केन्द्रहरूले अतिरिक्त वरिपरि क्षेत्रहरु लाई स्थानीय सम्झौता र साझेदारी कार्य गर्ने आधारमा आवरण गर्न सक्दछ। बौद्धिक फेफड़ों रोग मा ब्रिटिश लुंग फाउंडेशन रिपोर्ट देखि अनुकूलित जानकारी (बेहतर हेरविचार को लागि एक नक्शा: अन्तरराष्ट्रीय फेफड़ों को रोग संग मान्छे को लागि प्रभावी हेरविचार मार्गहरु, सेप्टेम्बर 2017)